China ngerabha ukutyabeka, UV yombane, shinning yoshicilelo, transfer amanzi detangler iinwele ngebrashi nge Intelliflex bristles mveliso kunye nabenzi | Yongsheng
Ukutyabeka ngerabha, umbane we-UV, ukushicilela ukukhanya, ukuhambisa iinwele ngebrashi eneebhanti zeIntelliflex
Izinto: ABS, TPR, inayiloni,
Umbala: Mnyama, Bomvu, Luhlaza, Mthubi, Luhlaza,… ulwenziwo.
Iibhulashi ze-Detangler zeenwele zisebenzisa i-Intelliflex bristles ekhethekileyo egobayo kwaye iguqule ukususa amaqhina ngaphandle kwamandla. I-detangler hair brush yenza ngokugqibeleleyo ngeenwele ezithe tye, iinwele ezinqamlekileyo, iinwele ezincinci, iinwele ezinzima, iinwele ezonakalisiweyo, ii-wigs, kunye nezandiso. Ingasetyenziselwa kuzo zombini iinwele ze-WET okanye ezomileyo ezinokophuka okuncinci. I-intelliflex bristles iyakwazi ukwahlula ngobunono kweyona tangali inzima ngaphandle kokukrazula, ukugoba okanye ukutsala. Ishiya iinwele zijongeka zikhazimla kwaye zinombala omdaka ngefriz encinci. I-Detangler yebrashi yeenwele yenzelwe ngokuqaqambileyo ukunciphisa iintlungu kunye nokukhusela iinwele ngokuchasene neziphelo. Ikuvumela ukuba uhlambe ngamandla angaphantsi ukuze ukwazi ukuphazamisa ngomonakalo omncinci kwizinwele zakho. Ibrashi emanzi yeenwele ayifani nebrashi eqhelekileyo esebenza ngokuchasene neenwele, ibrashi ngamaqhina Ibhrashi ilungisa ngobunono ezona ndawo zinzima zentlungu engenamava ngaphandle kwamandla ukuze ukwazi ukuphazamisa umonakalo omncinci kwizinwele zakho. Iibrashi eziguqukayo zebrashi zibalasele kubantu abadala kunye nabantwana abanethenda okanye ubukrakra bentloko. I-bristles eyahlukileyo iyakwazi ukwahlula ngobunono kweyona tangali inzima ngaphandle kokukrazula, ukugoba okanye ukutsala. Ngelixa iibrashi eziqhelekileyo zisebenza ngokuchasene neenwele, ngokusisiseko zikrazula kwaye zikhuphe iinwele ezinamaqhina endaweni yokuyinqanda. Iibristles zinokuthunyelwa umyalezo ngovavanyo lwe-4-5N ngokuqina okwangoku.
Sineemilo ezahlukeneyo esinokuzenza nezokungaziphathi kakuhle. Kwaye kunokuba nesiphelo esahlukileyo. Ukutyabeka ngerabha, ukuhambisa amanzi, ukuhambisa okushushu, umbane we-UV, ukupeyinta ukukhanya zonke ziyafumaneka.
Egqithileyo Ukutyabeka ngerabha, ukuhambisa amanzi, i-UV isikhuseli seenwele ze-paddle kunye nomqamelo oguqukayo
Okulandelayo: Umbane we-UV, ukuhanjiswa kwamanzi, ukuqaqamba kwebrashi yokushicilela iinwele ngesiphatho esiyiliweyo
Iibhokhwe zeenwele zeBrashi
Iibrashi zeenwele zeebhokhwe
Hombisa iBrashi yeenwele
Iibrashi zeBrashi zeenwele
Iseti yebrashi yeenwele
I-Rose Gold Brush yeenwele
Umthi oQinisekayo weenwele Brush